သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> ဂဟေဆက်အငွေ့ Extractor -> Benchtop အငွေ့ Extractor
ကျနော်တို့ကိုမကြာခဏအစာရှောင်ဖွံ့ဖြိုးဆဲလုပ်ငန်းနယ်ပယ်၌ရှိသောနည်းပညာကိုပြောင်းလဲမှုအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်တိုးတက်စေ။ ကျနော်တို့သေချာ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ကြောင်းအောင်ရှိသမျှနည်းလမ်းတွေကြိုးစား Benchtop အငွေ့ Extractor ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်ပြေစေပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏ကိုးကားပိုမော်ဒယ်များ၏အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်ကိုပူဇော်ဖို့ပျော်ရွှင်ဖြစ်ကြ၏။ ကျေးဇူးပြု ယခုအဆက်အသွယ်.
လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ကွဲပြားခြားနားသောစျေးကွက်အတွက်အကောင်းဂုဏ်သတင်းကိုမွေ့လျော်။ ဒီအောင်မြင်မှုအတွက်ကျနော်တို့စဉ်ဆက်မပြတ်လူအပေါင်းတို့သည်သင်၏လိုအပ်ချက်များဖြည့်ဆည်းရန်သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုနှင့်ထုတ်ကုန်ကိုပူဇော်ကြလိမ့်မည်။ ရန်တွန့်ဆုတ်ကြဘူး ကျေးဇူးပြု. ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ သင်မည်သည့်စုံစမ်းရေးရှိပါက။
သင်အငွေ့ Extraction လိုအပ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဤ !!
1. ဂဟေနှင့်ဂဟေဆက်အငွေ့ extractor အမှုန်များနှင့်ဓာတ်ငွေ့နှစ်မျိုးစလုံး၏သန့်ရှင်းရေးအဘို့ဖြစ်၏။ ဒါဟာဘာကြောင့်သိသိသာသာမှ freestanding ပြွန်နှင့်ချိန်ကိုက်လေကြောင်းရန် volume အနှင့်အတူအန္တရာယ်ဖြစ်စေမီးခိုးဘမ်းထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကိုဂဟေလုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်း hydrocarbon နှင့် cyanide သည်, ဂဟေဆက်အိုး၌ဖြူငိုက်ဆင်း, လေဆာကြောနှင့်ထု, ပုံနှိပ်ခြင်း, အတိုင်း, အန္တရာယ်ဖြစ်စေပစ္စည်းများ filter မှဒီဇိုင်းပြုလုပ် သင့်ရဲ့အလုပ်လုပ်ပတ်ဝန်းကျင်တိုးတက်စေ။
2. ဒီဂဟေလုပျငနျးအတှကျပန်ကာစုပ်ယူသည်ကြီးစွာသော benchtop မီးခိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာပွောငျးနိုငျသောကာဗွန် filter ကိုရှိပါတယ်။
4. အလင်းအလေးချိန်နှင့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဒီဇိုင်း, အာကာသနှင့်ရွှေ့ဖို့လွယ်ကူသိမ်းဆည်းပါ။
5. Brushless မော်တာနိမ့်သံ, တည်ငြိမ်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်, ရှည်သောအသက်အချိန်နှင့်နိမ့်ပါဝါစားသုံးမှုနှင့်အတူမြန်နှုန်းမြင့်ထောက်ပြကြပါတယ်။
အကောင်းသက်ရောက်မှုခုခံနှင့်အတူ 6. တန်ခိုးကြီးအင်ဂျင်နီယာကိစ္စ။
7. ဂဟေပစ္စည်းများခဲနှင့်ဓာတုတက်ကြွသုတ်ဆေးအများအပြားအမျိုးမျိုးကြောင့်လုပ် soldering သောအခါ, အဆိပ်သင့်ပစ္စည်းဒီတော့အပေါ်မပျက်, ခေါင်းကိုက်ခြင်းဆိုတော့လူများစွာ လုပ်. ရသောထွက်လာ၏။ လျင်မြန်စွာအဆိပ်အတောက်ဓာတ်ငွေ့ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်အလုပ်သမားများ၏သက်သေပြကျန်းမာရေးကိုထိရောက်မှုနိုင် 468ESD ဂဟေဆက်အငွေ့ extractor ကိုသုံးပါ။
* ဂဟေ, လှိုင်းဂဟေ, reflow ဂဟေ။
စသည်တို့ကို * ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်မှုလုပ်ငန်း, အလှအပ,